Goomenti Steeti Rivers eliekotana igwe mmadu onu
N’akụkọ siri na-aka ndị Channels Television bịara anyị, gọọmenti Steeti Rivers eliena mmadụ 89 n’ime mmadụ 95 ndị ahụ ọkụ gbagburu n’ụbọchị Tọzdee. E likọtara ha niile ọnụ n’otu ọnụ ili n’Okobe. A chọpụtara ndị nwe mmadụ 6, were bunye ha ozu ndị nke ha. E liri mmadụ 86 ndị ọzọ a na-amaghị ndị nwe ha n’obodo Okobe dị n’okpuru ọchịchị Ahoada West.
Ọ bụ gịnị gburu ndị a? Ndị uwe ojii na Port-Harcourt na-ekwu n’otu ụgbọala tanka e ji ebu mmanụ petrol mebiri. Igwe mmadụ were gbakọọ ebe ahụ na-ezuru mmanụ petrol. Tanka ahụ mechara gbawaa, bọrọ ọkụ. Ọkụ gbagburu mmadụ 95. Mmadụ 18 merụrụ ahụ. Mkpamkpa a kpara n’ụtụtụ Tọzdee.
Ị ga-echete n’ụdị ihe a emego mbụ na Lagos, n’abalị 26 nke ọnwa Disemba afọ 2006. Ọkụ gbagburu igwe mmadụ ruru 300 ebe ha na-ezu oshi mmanụ petrol n’ebe ndị omekome kụpuru igwe paypụ na-ebu mmanu.